Vima Construction - Fampahafantarana sy tarehimarika tsara ho fantatra - Vision Madagascar
Pejy fanolorana Asa atao Vima Construction Fampahafantarana sy tarehimarika tsara ho fantatra
Fampahafantarana sy tarehimarika tsara ho fantatra Noho ny fivoarana sy ny tolotra mihamaro aterik’izany eo amin’ny sehatry ny famapanofana tany sy trano, ny vondrona Vima dia miara-miasa akaiky amin’ireo orinasa mpanao trano.
Izany no nahatonga an’ny Vima Construction tamin’ny volana Martsa 2008, handimby ny orinasa Cogénal izay efa nanana ny traikefany hatramin’ny taona 1984.
Vima Construction dia mpikambana ao amin’ny SEBTP (Syndicat des Entrepreneur du Bâtiments et Travaux Publics) eto Madagasikara sady tompon’ny ampahany 99,98 %.
Ny Vima Construction dia afaka mamita ara-potoana ny asa manara-penitra sy manaja ny fitsimpim-piarovana ankinina aminy (indrindra noho ny fiaraha-miasany akaiky amin’ny Bureau d’études) satria manana mpiasa voaofana sy fitaovana harifomba ilaina amin’izany.
Vonona tanteraka amin’ny fanatontosana asa vaventy toy ny BTP, indostrialy ary génie civil ny orinasa satria dia mpiasa matianina toy ny tompomarika, mpahaimaritrano ary teknisianina voaofana no miara-miasa aminy.
Tale Jeneraly : Zouzar Bouka Adiresin’ny birao : Immeuble SACM - 1er étage Ankorondrano Antananarivo Madagascar Téléphone : +261 20 22 330 94 Fax : +261 20 22 381 61
E-mail : construction@vima.mg
Vola niditra 2010 : 4 905 619 873Ar HT
Isan’ny mpiasa 31 desambra 2010 : 147
Reny vola : 360 000 000 Ar
Toerana iasana : Faritany manerana an’i Madagasikara
Tompom-bola: ny 99,98% dia an’ny vondrona Vima